Kala-bixinta Mashiinka Mashiinka Encyclopedia - Warshadaha iyo Ganacsiga Shanghai Duxia
In geeddi-socodka ah ee lagu shaqeynayo mashiinka jeexjeexa, laga bilaabo bilawga ilaa joogsiga, ka dibna dayactirka, waxay umuuqataa mid fudud, laakiin dhab ahaantii "qarsoodi qarsoon". Ku shaqeynta si waafaqsan habraaca hawlgalku waxay ka caawin kartaa shirkadaha inay yareeyaan shilalka shilalka ayna hubiyaan nabadgelyada hawlgalka.
A. Daaran shidhka
1. Daar furaha go'doonka korantada (oo lagu dhejiyo qolka koontaroolka korontada hortiisa), taabo BADBAADADA JOOJI JOOJINTA iyo ISKU DIYAAR U QAADASHADA, daar MAKIINADDA SI RUN (qalabka ugu weyn) ka dibna fiiri danab (380V), oo hubi in hadda ay sax tahay oo xasilloon tahay.
2. Daar shidalka korontada ee nidaamka Haydarooliga (oo lagu dhejiyay meertada weyn ee korontada ku shaqeysa), oo hubi in heerka saliida ee nidaamka guud ee korontada iyo muujinta cadaadiska ay sax yihiin oo xasilloon yihiin.
3. Fur furaha waallida ee xirmida (oo ku dheji tuubbada qaadashada hoosta qolka xakamaynta pneumatic) hubi in cadaadiska hawadu sax yahay oo xasilloon yahay.
B. Dejinta xakamaynta
1. U deji qeybta kala-goynta iyadoo la raacayo nooca filimka, dhumucdiisa, dhererkiisa, ballaciisa, iwm.
2. Soo saar faylasha filimka u dhigma.
3. Deji dhererka iyo ballaadhida dib u-habeynta filimka qeexitaanka u dhigma.
4. Xullo saldhigga loo yaqaan 'winding winding', hagaaji gacanta rullaluistemadka iyo rullaluistemadka, kuna rakib xuddunta warqadda qeexitaanka u dhiganta.
C. Rarid, dalool iyo ku soo biirista filimka
1. Quudinta: iyadoo la raacayo shuruudaha qorshaha jeexitaanka, iyadoo la raacayo qawaaniinta howlgalka wadista, sida ku cad xaaladda dhabta ah, duubista waalidka ee dhiganta waxaa lagu xirayaa sariirta gabowga, jihada waxaa lagu xushay iyadoo loo eegayo dusha sare ee gudaha iyo bannaanka, oo la saaray sariirta furitaanka ee mashiinka jeexjeexa, oo la isticmaalay Batoonka xakamaynta ayaa xiraya xudunta birta wuxuuna ka tagayaa cududda taageerada aasaasiga ah ee birta iyo wadista.
2. Daloolinta filimka: Marka uusan filim ku oolin mashiinka jeexaya, filimka waa in la dalooliyaa. Adoo isticmaalaya mashiinka jeexjeexa mashiinka mashiinka iyo furayaasha shaqada, ku xir darafkiisa dhamaadka filimka asalka ah isha sawirka silsiladda xarkaha filimka oo dhaqaaji badhanka filimka si aad ugu qaybiso filimka si siman rollers-ka geedi socodka jeexitaanka.
3. Kala bixida Filimka: Markuu filim ku jiro mashiinka jeexjeexa isla markaana isku duubka la beddelo, isticmaal miiska kala-baxa filimka faakuumka ah, marka hore ku bilow miiska kala-baxa filimka si aad ugu shaqeyso, adoo gacanta ku sita filimka rullaluistemadka ugu horreeya ee jeexitaanka mashiinka oo bilaw mashiinka faakuumka ee faashadda filimka si filimku si habsami leh ugu milmo miiska miisaanka filinka, ku dhaji cajaladda laba-geesoodka ah isla markaana ka jaray filimka xad-dhaafka ah ee cajaladda hoostiisa ku jira, ku simbiriirixan filimka sagxadda furaysa oo bilow hoose mashiinka faakiyuumka (vacuum pump) si filimku si habsami leh u soo nuugo, ka saar cajaladda Dhig lakabka xaashida oo aad ku sinnaato filimka xabagta, kala-goysyadu waa inay ahaadaan kuwo hagaagsan oo aan laalaabasho lahayn, ka dibna dami matoorrada faakuumka kore iyo kuwa hoose, oo u fur miiska filimka jago aan shaqeyn.
D. Bilow oo orod
1. Beddel qeexitaanka, ku dheji udub-dhexaadka warqadda dusha iyo gadaasha bareegyada, oo ogeysii dhammaan shaqaalaha in ay ka baxaan mashiinka oo ay u diyaar-garoobaan hawlgal marka khariidadda saxaafaddu ku jirto xaalad diyaar u ah hawlgalka.
2. Ku dheji baararka 'ANTI-STAIC BARS' Console weyn ee AUTO, daar diyaar u ahaanshaha, oo bilow MASHAQADDA Orod si ay u socoto.
E. xakamaynta kala-baxa
Inta lagu jiro hawlgalka jeexitaanka, si taxaddar leh u ilaali oo u fiirso saameynta jeexitaanka, oo hagaaji oo xakamee xawaaraha kala-baxa, kala-goynta xiisadda, cadaadiska xiriirka, rollers qalooca, rollers wax jeex jeex, hagayaal gees, iwm.
F. Dib u laabo
1. Marka dhamaadka iyo dibedda mashiinka dib-u-rogista uu joojiyo inuu ordo, isticmaal badhanka soo dejinta filimka si aad ugu dhejiso filimka gawaarida rarka ee diyaarinta ah, jar filimka oo ku dheji duubka filimka xabagta daboolka.
2. Isticmaal badhanka sii-deynta chuck si aad u dabciso shaashadda oo aad u hubiso in xudunta warqadda ee duub kasta oo filim ahi ka tagayso xudunta warqadda. Haddii hal dhinac wali ku dhagan yahay xudunta warqadda, gacanta ka dejiso duubista filimka.
3. Hubso in ka dib markay aflaanta oo dhami ka wada baxaan chuck-da oo ay kooto ku xidhaan, isticmaal badhanka xamuulka filimka si aad kor ugu qaaddo cududda wareegeysa, rakib waraaqda u dhiganta warqadda, kuna xira filimka si nadiif ah warqadda xudunta u ah jeexitaanka xiga.
G. Mashiinka jeexjeexa ayaa xidha
1. Markuu duubista filimku gaadho dhererka loo dejiyey, qalabka ayaa si otomaatig ah u istaagi doona.
2. Inta lagu jiro hawlgalka qalabka, riix MAKIINADDA JOOJI si aad u joojiso sida loogu baahan yahay.
3. Markii aad u baahan tahay inaad si dhakhso leh u joojiso, riix furaha MAKHINE STOP in ka badan 2S.
4. Marka ay jirto xaalad degdeg ah sida qalab ama shil bini'aadan, riix JOOJI DEG-DEG si aad u joojiso xaaladda degdegga ah.
H. Arimaha u baahan fiiro gaar ah
1. Hubso in danabku, kan hadda jira iyo kan Haydarooliga ay sax yihiin oo xasilloon yihiin ka hor intaanad bilaabin.
2. Kahor inta qalabku u diyaar garoobin hawlgalka, dhammaan shaqaalaha waa in lagu wargeliyaa inay ka baxaan qalabka si loo hubiyo nabadgelyada qofka ka hor intaan la bilaabin oo la hawlgelin.
3. Markay kala bixintu socoto, ha ku taabanin duubista filimka ama udub-dhexaadka gacmahaaga, si aadan gacmahaaga ugu lug yeelan oo aadan u keenin dhaawac shaqsiyeed.
4. Inta lagu guda jiro qalliinka, iska ilaali inaad xoqdo ama ku gooyso mindi ama shay adag.